Imveliso yeGPU ekulindeleke ukuba ithwale iMac Pro inyusa | Ndisuka mac
Imveliso ye-GPU ekulindeleke ukuba iqhubeke neMac Pro iyonyuswa
Sele kudlule iinyanga ezininzi okoko kwabanjwa intetho ephambili yeWWDC. Ngokukodwa, ukusukela ngenyanga kaJuni silinde amanqaku okanye ezinye iindaba malunga nokuba iMac Pro iza kuba nakho ukusinika ntoni.Sazi kuphela kwinkampani ukuba siya kulazi iqela ngaphambi kokuphela konyaka. Konke oku kude kube namhlanje, njengoko imithombo yeendaba eyahlukeneyo ibonisa ukuba abathengisi abaninzi be-Apple bazakonyusa imveliso ye-GPU ye-iMac Pro, i-AMD Radeon Pro Vega. Nangona kukuqagela kuphela, kuqikelelwa ukuba yeyona iMac ilungiselelwe kakhulu, iya kuba nayo I-AMD Radeon Pro Vega, kuhlobo lwengu-56 kunye no-64.
Umahluko phakathi komnye nomnye ulele kwimemori yevidiyo ezinikeleyo. Ngelixa uguqulelo lwama-56 lwalunokuba ne-8 Gb, imodeli engama-64 yayiya kuba ne-16 Gb yevidiyo ezinikeleyo. Kuyabonakala ukuba, inkampani iSiliconware Precision Industries, iya kuba yenye yeenkampani ezinikezela ngakumbi kwimizamo yokwenza amakhadi.
Ngelishwa, asinakuchaneka ngakumbi, ngaphandle kokubona i-Apple inyuka. Inkampani ayizibopheleli kumhla ongenguDisemba. Ukuba sijonga ukuhanjiswa kwe-2016 MacBook Pro, imihla yokuhanjiswa yayisondele kuDisemba, inyanga apho iApple ilindele ukuba nefuthe lokuthengisa ngakumbi, ngenxa yokusondela kweKrisimesi.
Ukubheja iApple kwiMac Pro, emva kokuvuma esidlangalaleni ukuba inento engakhathalelwanga eluntwini eneemfuno ezinzima kakhulu, ikakhulu abahleli bevidiyo kunye nokufota. Kwaye ngokomgaqo, umatshini omtsha we-Apple akufuneki akushiye ungakhathali. Ukuza kuthi ga ngoku sinokuqikelela: I-Intel Xeon CPU, enee-cores ezili-18, ulungelelwaniso ukuya kuthi ga I-128 Gb ye-RAM ye-ECC. Ewe kunjalo, ayilulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali, kuba amaxabiso alo e-US abekwe ngokwabahlalutyi, kwi 5000 $.
Ngaphandle koko, ubume bezixhobo ziyafana kwi-iMac yangoku, kunye 5k umboniso. Yahluke kuphela kumbala wangaphandle, ubukhulu becala ialuminiyam engwevu, into engazange yabonwa kwiMac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Imveliso ye-GPU ekulindeleke ukuba iqhubeke neMac Pro iyonyuswa
I-2018 e-Apple inokuzisa iindaba kuwo wonke umntu
Sivavanye isiseko sokutshaja se-Apple Watch kunye ne-iPhone evela kwi-Oittm [Uphengululo]